Madaxweyne Farmaajo oo la Caleema-saaray - iftineducation.com
Madaxweyne Farmaajo oo la Caleema-saaray
aadan21 / February 22, 2017
iftineducation.com – Munaasabadda Caleema-saarka, waxaa marti ku ahaa, Madaxweyneyaashii hore ee Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud iyo Seekh Shariif Sh. Axmed, Sidoo kale Madaxweynaha Jabuuti, Madaxweynaha Kenya, Ra’iisul wasaaraha Ethiopia, wakiillo ka socdey waddamada Caalamka, waxaana yimd munaasabadda madax ka socotay 124 dal.
Madaxweyne Farmaajo, waxaa wehlisay marwadiisa.
Munaasabadda waxaa khudbado ka jeediyey, wakiillo iyo madaxweyneyaal, Wakiil Q.M ee Soomaaliya , Wakiillo ka socdey Turkiga, Jaamacadda Carabta, Midowga Africa iyo Suudaan, ayaa iyagana sheegay in si dhab ah ay ula shaqeyn doonaan oo ay taageeri doonaan dowladda Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Stephen Schwartz waxa uu sheegay in doorashadii Soomaaliya ka dhacdey ay muujineyso nidaam iyo dowladnimo dimoqoraadi ah.
Madaxweynaha dowladda Kenya Uhhuru Kenyata, ayaa u hambaleeyey Madaxweyne Farmaajo iyo Shacabkiisa, waxa uu sheegay in uu abuurayo xiriir ku dhisan Derisnimo, walaalnimo iyo Iskaashi dowladda Kenya-na ay diyaar u tahay garab istaagga Soomaaliya.
Ra’iisul wasaaraha Itoobiya Hailemariam Desalegn, ayaaa sheegay in Soomaaliya ay tusaale fiican u tahay dalalka dagaallada ka soo baxay, waxa uu intaa raaciyey in guusha hadda ay Soomaaliya u horseeddo nabad iyo barwaaqo.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti, Mudane Ismaaciil Cumar Geelle, ayaa kula taliyey shacbiga Soomaaliyeed in ay sii wadaan taageerada ay u hayaan Madaxweynaha iyo dowladdiisa, dowladda Jabuutina ay mar walba Soomaaliya u yahay Hiilka koobaad.
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed, ayaa ballan-qaadey in fursadda ay maanta shacabka Soomaaliyeed heystaan uu ku gacan siin doono dowladda Madaxweyne Farmaajo.
Sidoo kale Madaxweynihii hore ee Soomaaliya, mudane Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa sheegay in wax badan lagu soo guuleystay, mar walbana uu u taagan tahay dhismaha iyo gacan siinta dowladnimada Soomaaliyeed.
Madaxweynaha la caleema-saaray ee Soomaaliya, Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ayaa ugu horreyn uga mahadceliyey dowladihii ka horreeyey oo u sheegay in dalka ay soo gaarsiiyeen meesha uu maanta joogo, sida doorashadii dalka ka dhacay.
Waxa uu sheegay in dalka muddo uu burbur ku soo jiray, waxa ugu muhiimsanna ay tahay nabadgalyada, xuquuqda ciidammada ayuu xusay in dowladdiisa ay mar walba bixin doonto, waxa uu u mahadceliyey ciidammada AMISOM, hasa yeeshee waxa uu carabka ku dhuftay in ay lagama maarmaan tahay dhammeystirka dhismaha ciidanka Qaranka Soomaaliyeed.
Abaaraha dalka aafeeyey, ayuu sheegay in dowladdiisa ay ka leedahay istaraatiijiyad weyn oo lala kaashan doono khubarro, si looga hortago abaaraha soo laa laabtay.
Caddaaladda ayuu sheegay Madaxweyne Farmaajo in ay sal u tahay amniga, shacabkuna looga baahan yahay in ay dowladda ku gacan siiyaan arrinta nabadda iyo xasiloonida dalka, kooxanaha Al-Shabaab ayuu sheegay in uu dhammaadey waqtigii ay ummadda dhibaateyn jireen oo hadda kaddib loo midoobey la dagaallankooda.
Ugu dambeyn Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo, ayaa sheegay in Soomaaliya lagu sheego dalka ugu musuq musuqa badan caalamka, ammaanada shacabku ayuu xusay in ay ilaalin doonto dowladda, isla markaana laga wada shaqeyn doono cirib tirka musuqa, si Soomaaliya looga dhigo waddanka ugu musaqa yar adduunka.
Madaxweyneyaashii munaasbadda caleema-saarka ka soo qeyb-galay ayaa dalalkooda si nabad ah ugu laabtay.
Madaxweynaha Kenya iyo R/Wasaaraha Itoobiya oo goordhaw ka dhoofay Muqdisho
Farmaajo iyo Geelle oo si wadajir ah u dhagax dhigay dhismaha Safaarada Jabuuti ee Muqdisho (Daawo Sawirada)